Dhirta Shiinaha, Soosaarida Dhirta, Shaaha Dhirta - Drotrong
20 Milyan+ 20 saldhig oo kiiloomitir oo laba jibbaaran
25 + 25 + khibrad warshadeed
8000+ 80,000 ㎡ warshad
2000 + 20,000 Tan oo Soo saar Sanadeed ah
Horumarinta shirkadeena, waxaan aasaasnay ​​saldhig lagu beero iyo saldhig wax soo saar oo geedo Shiinaha ah. Saldhigga dhirta, waxaan leenahay Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus iyo wixii la mid ah, oo daboolaya in ka badan 20 milyan oo mitir murabac ah. Saldhigga wax soo saarka, waxaan leenahay labo warshadood oo wax soo saarka aasaasiga ah iyo hal warshad soo saarida dhirta oo daboosha in kabadan 60,000 mitir murabac ah Waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhisno warshad cusub soo saarista dhirta iyo warshad soo saarta daryeelka caafimaadka saddex sano gudahood.
20 Million Square Miters Plant Saldhig & 80,000 ㎡ warshad
Dhirta Shiinaha inbadan >>
Soosaarida Dhirta inbadan >>
Shaah Dhirta inbadan >>
Alaabada Daryeelka Caafimaadka inbadan >>
Maalmahan, dadku waxay aad ugu fiirsadaan caafimaadkooda, sidaas darteed, badeecooyin badan oo daryeelka caafimaadka ah ayaa dadku doorbidaan.Drotrong wuxuu bixiyaa geedo tayo fiican leh oo laga soosaaraa alaabta ceyriinka ah ee alaabada daryeelka caafimaadka. Alaabta ceyriinka ahi waa amaan, dabiici ah oo leh qiime macquul ah.
Isbitaalka iyo Dukaanka Dawooyinka
Daawada dhaqameed ee Shiinaha (TCM) waa nooc daaweyn ah oo asal ahaan ka yimid kumanaan sano ka hor Shiinaha. Badanaa waxaa loo yaqaan "TCM", xirfadlayaashuna waxay isticmaalaan geedo si ay uga hortagaan ama u daaweeyaan dhibaatooyinka caafimaad. Caleemaha Shiinaha ee loo yaqaan 'Drotrong' ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa isbitaalka iyo dukaanka dawada, 100% dabeecadda iyada oo aan lahayn wasakh, taas oo ah xulashada ugu wanaagsan ee suuqaaga oo leh qiimaha tooska ah ee warshadda.
Isticmaalka ku darista quudinta dhirta ayaa muhiimad gaar ah u leh wax soo saarka xoolaha iyadoo ay ugu wacan tahay mamnuucida isticmaalka antibiyootikada qaarkood, waxyeelada haraaga waxyeelada leh iyo qiimaha waxtarka. Drotrong waxay leedahay geedo fara badan iyo soo saar taas oo loo isticmaali karo waxyaabaha lagu daro quudinta dhirta.
Warshadaha dawooyinka badankood waxay qaataan dhirta Shiinaha ama soosaarka dhirta sida alaabta ceeriin. Drotrong waxay leedahay saldhig lagu beero, warshad lagu farsameeyo dhirta iyo warshad dhir dheeri ah. Laga soo bilaabo alaabta ceyriinka ah ee geedaha laga soo saaro, waxaan ku siin karnaa adeegga OEM oo kuu badbaadin kara waqtigaaga iyo lacagtaada.
Hadda suuqa quruxda waxaa ku qulqulaya waxyaabaha la isku qurxiyo dhirta. Dadku waxay doortaan qurxinta dhirta maxaa yeelay way nabdoon yihiin, waxay u fiican yihiin dhammaan noocyada maqaarka waxayna ka madax bannaan yihiin waxyeellooyinka soo raaca. Drotrong geedaha Shiinaha iyo soosaarka waxaa loo isticmaali karaa warshadaha qurxinta dhirta.
Tijaabooyin bilaash ah adiga
Waxaad ku hubin kartaa tayadeena shay-baarka
Guji si aad u hesho shaybaar
Aqoon isweydaarsiga dhirta dhirta ayaa bilaabay tijaabinta tijaabada ...
Aqoon isweydaarsiga dhirta ee shirkadeena ayaa bilaabay wax soo saar tijaabo ah, taas oo macnaheedu yahay in Astragalus, forsythia, bupleurum iyo qalab kale oo daawo oo dhab ah lagu baaraandegi doono qaybaha dhirta iyo granules caanaha ee khadkeena wax soo saar ee mustaqbalka, waxayna aadi doonaan ...
Maca wuxuu ku dhashay buuraha Andes ee Koonfurta Ameerika oo leh joog dhan 3500-4500 mitir. Waxaa badanaa lagu qaybiyaa aagga deegaanka deegaanka Puno ee ku yaal bartamaha Peru iyo magaalada Puno ee Koonfur-bari Peru. Waa geed ka mid ah nooca Lepidium meyenii oo ku yaal Cruciferae. Waqtigan xaadirka ah, weyn ...
Saliida yamaarugta caanaha ku jirta
Saliida yamaaruggu waa nooc ka mid ah saliida caafimaadka ee la cuni karo oo dabiici ah kaas oo laga sameeyay saliida iniin yarooyinka ku jirta. Waxay leedahay qiimo nafaqo oo sarreeya. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee saliida yamaaruggu ka kooban tahay waa asiidh dufan, taas oo muhiim u ah asiidh dufan leh, yacni linoleic acid (Content 45%). Caano ...